ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: "Unfair verdict"
WHAT WE DO? KO PAW
လောလောဆယ်တော့ ဆဲကြရုံပေါ့ဗျာ။ သန်းရွှေ ဆိုတဲ့ ကောင်ကြီး ကို မြန်မြန် ကာလနာတိုက်ဖို့ ပေါ့။ ဒင်းတို့ နဲ့ ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်း တွေ သားသမီး ဆွေမျိုး တသိုက် ကိုလဲ လက်တုံ့ပြန်ကြရမှာပေါ့။ ဒါးဒါးချင်း လှံလှံချင်း ဆိုတာ သူတို့ အဖေကြီး ပြောခဲ့တာလေ.
ပြောသားပဲ.. သန်းရွှေစ်ီရင်ချက်ချမှာပါလို့ ..သူ့ ကိုယ်သူကယ်တင်ရှင်ကြီးလိုလာလုပ်နေသေးတယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့ ဥပဒေအထက်မှာ သန်းရွှေရှိပဲ ရှိကြောင်းပြလိုက်တာပါ.. သန်းရွှေဟာ တရားသူကြီးဆုံးဖြတ်တာကို overwrite လုပ်ရကြောင်း မြန်မာပြည်မှာ ထင်သလိုလုပ်လို့ ရကြောင်း ထပ်ပြီး အထင်အရှားပြလိုက်တာပါ..
ကိုပေါ ပရိတ်သတ် တစ်ဥ said...
ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ပြည်တွင်းကလူဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရသူတွေကို စပြီး စည်းရုံးကြသင့်တာပေါ့။ ဘာကနေ စလုပ်နိုင်မလဲ တိုင်ပင်ကြပြီး ရှေ့ဆက်သင့်တာပေါ့။
ပြည်ပကလူဆိုရင်လည်း ကိုယ်နဲ့တူရာတူရာ အဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့ပြီး ပြည်တွင်းကို ထောက်ကူကြဖို့ ကြိုးစားကြရမှာပေါ့။ ချက်ချင်း ၀ုန်းဒိုင်းဆိုပြီးတော့ ဖြစ်လာမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အင်အားကောင်းလာရင် People Power ဆိုတာ ဖြစ်လာမှာပေါ့။ သပိတ်မှောက်ပြီး အစိုးရ ယန္တရားရပ်သွားအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
အားတက်စရာပြောရရင် အခု အဲသည်လို ကိုယ့်အစုအဖွဲ့လေးတွေနဲ့ကိုယ် လုပ်နေကြတဲ့ အုပ်စုလေးတွေ တဖြည်းဖြည်း များလာနေပြီ။ အခု အရမ်းသိသာ မြင်သာလာတယ်။ တချို့အဖွဲ့လေးတွေကလည်း စတင်ပေါင်းစည်းမိလာပြီ။
တချိန်မှာ ဒီအင်အားစုတွေအားလုံး အင်အားစုတရပ်အနေနဲ့ ပေါင်းစည်းမိသွားမှာ အသေအချာပဲ။ အရေးအကြီးဆုံးက ပြည်သူတွေဖက်က ရပ်တဲ့လူတွေကို အင်အားကောင်းအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ထောက်ပံ့ပေးဖို့ပဲ။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့။
အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော့်အမြင်ကို ပို့စ်ရေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးတာကို ထိရောက်တဲ့အဖြေဖြေနိုင်တဲ့သူ (အများလက်ခံနိုင်တဲ့အဖြေဖြေနိုင်တဲ့လူ) မရှိလို့ ကျနော်တို့ဒီအခြေအနေရောက်နေတာပါ
"No one is above the law" becomes No.1 is above the law. Idiotic Than Shwe. Please name their relatives and shame them.
No one is above the law in other countries except from Myanmar. In Our Golden Land Myanmar, Than Shwe is above the law in his this very life and in the hell in his next life. So sorry for your next life Than Shwe. Hope u can happy in your next life without sorrow and pain like u do upon others in this life. Hope your blood can satisfy all evils' hunger in the hell. Devil will detain u in the hell for 18000000000000000 years.
အန်တီစုတောင် ၆၅-- ရ၀ နားနီးနေပြီ....